टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय
काठमाडौं । डिएआर मुभिज एण्ड फिल्म ईन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को आयोजनामा यही फागुन १६ गतेदेखि फागुन २० गतेसम्म काठमाडौंको टुँडिखेलमा ‘राष्ट्रिय काँठे लोकदोहोरी महोत्सव–२०७६’ को हुने भएको छ । बुधबार आयोजक संस्था डिएआर मुभिज प्रा.लिले
प्रमोद खरेलको स्वरमा
काठमाडौं, लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको गीत 'धोकेबाज' सार्वजनिक भएको छ । दिपेन्द्र पोख्रेल 'देबेन'को शब्द, हरि लम्सालको सङ्गीत, उदयराज पौडेलको एरेञ्ज र चन्द्र चौधरीको मिक्सिङ/माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक
केकी अभिनित ‘हमनिके
काठमाडौँ : भोजपुरी लोकप्रिय गायिका इन्दु सोनालीको सुमधुर स्वरमा भोजपुरी गित 'हमनिके भागिया" को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । दर्जनौ चर्चित भोजपुरी गीतहरुमा आफ्नो जादुमय आवाज भर्न सफल गायिका इन्दु सोनाली बलिउडमा समेत
‘द भ्वाइस नेपाल सिजन
काठमाडौं । द भ्याइस अफ नेपाल सिजन २ मा राम लिम्बु विजयी भएका छन् । राजधानीको ह्यात ग्राउण्डमा शनिवार भएको भव्य ग्राण्ड फिनालेमा राम दर्शकको भोटका आधारमा विजयी भएका हुन् । साउन ३१ देखि शुरु भएको यो रियालिटी शो टेलिभिजनमा रुचाइएको
छोडपत्रले सुन्दर परिवारिक
काठमाडौं । दाम्पत्य नाता सम्बन्धमा घातक रोग हो, छोडपत्र । जसले पवित्र नाता सम्बन्धलाई गलत साबित गराएर सम्बन्धलाई नै सदाको लागि खारेज गराईदिन्छ । पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो बढ्दै गएको पाईन्छ । भनिन्छ
काठमाडौं । गायक समीर घिसिङ ‘भिटेन’ पक्राउ परेका छन्। नेपाली र्‍यापर तथा गायक भिटेनलाई बिहीबार महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रवक्ता एसपी केदार ढकालका अनुसार अश्लिल
टीका मालामा प्रकाश
काठमाडौं । गायक रामकृष्ण ढकालको आवाज रहेको तिहारको टिका माला बोलको गीत सार्वजनिक भएको केहि समयमै अत्याधिक चर्चामा छ । बिन्दवासिनी म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट ‘टीका माला’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको थियो । गीतमा रमेश बिजीका
काठमाडौं । युवा कवि मोतीराम भट्टको १५३ औं जन्मजयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिए । त्यही क्रममा काठमाडौंस्थित कपन संगीत सरोवरको आयोजनामा तीनै पुस्ताका सर्जकलाई समेटेर गजल गायन तथा वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । शनिबार सम्पन्न
जब घरमै भट्टी चल्छ :
घाउ चल्छ पट्टी चल्छ, लफडा त भैहाल्छ नि, जब घरमै भट्टी चल्छ, लफडा त भैहाल्छ नि ! घुट्की बढ्दै जाँदा असीम सुखदायी रसको, आँखा-आँखाको झट्टी चल्छ, लफडा त भैहाल्छ नि ! देखेर आफ्नो मान्छे अरूको प्यास बुझाउँदै, घाँटी छोई कट्टी चल्छ,
संचारकर्मी कमल सरगमको
काठमाडौं । हिन्दु नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा कलाकारलाई भने भ्याईनभ्याई छ । यही अवसर पारेर डिएआर मुभिजको प्रस्तुतिमा कमल सरगमको ‘माइती घर भाग–२, माइत जाम’ बजारमा ल्याएका छन् । लोकप्रिय गायक बद्री
गोबिन्दाले खुलाए दोस्रो
एजेन्सी । बलिउड चर्चित नायक गोबिन्दा आहुजाले दोस्रो पटक विवाह गरेको रहस्य खोलेका छन् । उनले सन २०१५ मै दोस्रो पटक विवाह गरेको भए पनि हाल एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त रहस्य खोलेका हुन् । त्यसो त गोविन्दाले नयाँ दुलहीसँग
आरके र बिनीको ‘सुनभन्दा
काठमाडौं । आरके उदासी र बिनी आचार्यको स्वरमा ‘सुन भन्दा कम छैन, हराए डर छैन...’ तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । विशाल रायमाझीको शब्द/सङ्गीत, लक्षुप्रसाद मल्लको एरेञ्ज, श्याम स्वेत रसाइलीको मिक्सिङ् रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको
मिस नेपाल अनुष्का
काठमाडौ । ‘मिस नेपाल वल्र्ड–२०१९’ अनुष्का श्रेष्ठ अमेरिकामा सम्मानित भएकी छन् । अनुष्कालाई क्यालिफोर्नियास्थित हिमालयन फाउन्डेशन क्रपले बिहीबार एक समारोह आयोजना गरि सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा उनलाई ३८ सय डलर सहयोग
उमा श्रेष्ठको ‘मेरो
काठमाडौं । गायिका उमा श्रेष्ठले हरितालिका तीज २०७६ लाई लक्षित गर्दै ‘मेरो राजै’ गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले वर्ष भरिको थकाई तीजको समयमा यस गीतको माध्यमबाट मेट्ने वातावरण होस् भन्ने उद्धेश्यका साथ गीत सार्वजनिक गरेको बताएकी
गायक देवकोटाले ल्याए
अभिषेक सापकोटा/काठमाडौं । तीज आउन केही हप्ता बाँकी नै छ । तर, तीजका गीतले गाँउ–शहर सबैतिर माहोल तातिसकेको छ । अहिले हेर्ने गीत निकाल्न र युट्युबमा राख्न चल्तीका कलाकार देखि नवप्रवेशी समेत भ्याइँनभ्याइँ छ । यसै माहोलमा माउन्ट
अब कमल मेलिना राईसँग
काठमाडौं । संगीत क्षेत्रमा छोटो समयमा राम्रो छाप छोड्न सफल संगीतकर्मी कमल अधिकारी नाचौँ छमछम भन्दै गायकका रूपमा देखा परेका छन् । ‘पागल बनायौ’, ‘मोहनी पो लगायौ कि’जस्ता एक दर्जनजति हिट गीतमा संगीत भरिसकेका अधिकारी मेलिना
गद्य कविता हरियो पारीको रातो सारी डिलमाथिको मकै बारी नजिकै वनमारा घारी सबैलाई पाखा लाउँदै पातलो बुट्टे फरियामा मैले देखेको मान्छे मेरी सपनाकी रानी हुन् । सेतै उडेको सिमलको भूवा सिरानीमा कसेको रुवा ज्वाला दन्कन
काठमाडौं/सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीले ‘तीजैमा ब्रत बसी...’ बोलको गीत बजारमा ल्याएकी छन् । मिलापको प्रस्तुतिमा गीता अधिकारीको शब्द रहेको गीतको भिडियो सोमबार काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरस्थित मनसुन क्याफेमा सार्वजनिक गरियो । नायिका
थाहा छैन यो जिन्दगी
काठमाडौं । ‘थाहा छैन यो जिन्दगी कता जादैँछ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतकार सन्तोष थापाको ‘थाहा छैन यो जिन्दगी कता जादैँछ’ गीतमा अन्जु पन्तको आवाज रहेको छ। एक्सन रेकर्डिङ् स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको सो गीतलाई सदभाव टिभी
बहिरा कलाकार सुजल बम
काठमाडौं/दुवै कान नसुन्ने र बोल्न नसकन्ने बहिरा कलाकार सुजल बम अभिनित म्युजिक भिडियो ‘झिमझिम परेली...’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार मिलापको आयोजनामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । सङ्गीत
एजेन्सी । चर्चित बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको नयाँ फिल्म ‘मिसन मंगल’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। अक्षयले आफ्नो ट्विटरमा फिल्मको ट्रेलरबारे लेखेका छन्, ‘मिसन मंगल एउटा कहानी मात्र होइन, आश्चर्य हो, जसले असम्भव सपनालाई सम्भव
काठमाडौं । ‘इन्स्टाको फोटो’ चोरी गरेको आरोप सेलाउन नपाउँदै गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटालाई पुनः अर्को आरोप लागेको छ । कालीको शब्द संगीतमा तयार भएको ‘समाचार’ बोलको गीतमा संगीत चोरीको आरोप लागेको हो । १० महिना
रेखा पौडेलको तीज कोशेली
काठमाडौं । नेपाली महिलाहरूको महान पर्व तीज । हरेक वर्ष कलाकारहरूले तीजलाई लक्षित गरेर गीतहरु ल्याउने गरेका छन् । यसवर्ष पनि तीज आउन डेढ महिना बाँकी छ, तर तीज सम्बन्धि गीतहरु भने सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसै मेसोमा सङ्गीतकार तथा गायिका
अभिनेतृ रौतेलाको भिडियो
बलिउड कलाकार चर्चामा आउन अनेक हर्कत गर्छन् । उनीहरू कहिले ग्ल्यामर पोजमा सजिन्छन भने कहिले सेक्सी सिन दिएर हिट हुन्छन् । आकर्षक जिउडाल त उनीहरूको विशेषता नै हो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा इन्ट्राग्राममा हिट भएकी छिन् बलिउड
मदन पुरस्कारका लागि
काठमाडौं । मदन पुरस्कार २०७५ का लागि सात ओटा पुस्तक छनोटमा परेका छन् । गुठीले बुधबार श्रेष्ठ सूचीमा परेका पुस्तकको नाम सार्वजनिक गरेको छ । गुठीलाई प्राप्त भएका २५७ कृतिमध्ये उत्कृष्टमा परेका ७ पुस्तक छनोट भएका हुुन्। छनोट
डा. डीआरको प्रेमको
काठमाडौं/डा. डीआर उपाध्यायका यति बेला निरन्तर म्युजिक भिडियोका निर्माणमा जुटिरहेका छन् । केही समय अघि एकै साथ ७ गीति एल्बमका ३६ ओटा गीत एकै पटक सार्वजनिक गरेका उनले त्यसको केही अवधिपछि तीन ओटा एल्बम बजारमा ल्याएका थिए । ती एल्बमका
नारायण नेपाल, संगीतको बजार तातेको छ, आरोप-प्रत्यारोप छ, अनि छ एक्कासी अघि बढाइएको सहमति ! च्यातियो भनेर चर्चामा ल्याइएको गलबन्दी र पछ्यौरीले नेपाली सांगीतिक आकाशको एक आश्चर्यजनक खबर बोक्न पुगेको छ ! भर्खरै सहमति गरियो भनिएको
काठमाडौं । चर्चित लोकगीत ‘गलबन्दी’को विवाद सल्टिएको छ । बुधबार संगीतकार/गायक शम्भु राई र गायक प्रकाश सपुतबीच ४ बुँदे सहमतिपछि गीतको विवाद समाधान भएको हो । सहमति अनुसार अब युटुबमा ‘गलबन्दी’ बोलको गीतको संगीत सिर्जनामा शम्भु